कस्तो अचम्म ! १२ वर्षमै आमा बन्दै यी बालिका::Hamrodamak.com
कस्तो अचम्म ! १२ वर्षमै आमा बन्दै यी बालिका
चन्चल अनी साथीभाईसँग यताउती पुगेर रमाइलो गर्नुपर्ने र पढ्नुपर्ने उमेर।
काठमाडौं । आमाबुबाको काखमा लडीबुडी गर्नुपर्ने उमेर। हाँसखेल र रमाइलो गर्नुपर्ने उमेर। चन्चल अनी साथीभाईसँग यताउती पुगेर रमाइलो गर्नुपर्ने र पढ्नुपर्ने उमेर।
तर मकवानपुरको राक्सिराङ–३ की १२ वर्षीया बालिका गंगा चेपाङको पेटमा सात महिनाको गर्भ छ।
उनले भागेर बिहे गरेको ९ महिना भएको छ भने गर्भ रहेको ७ महिना। यो खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा हेटौँडाबाट रोशन पराजुलीले लेखेका छन्।
०७४ पुस ८ गते मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–७ का १८ वर्षका किशोरसँग उनको भागी बिहे भएको हो। कक्षा ४ मा पढ्दै गरेकी गंगा र कक्षा ३ मा पढ्दै गरेका उनका पतिको बिहेपछि पढाई छुटेको छ।
भागी बिहेपछि १२ वर्षमै गर्भवती भएको कुरो सुरुमा गंगाले लुकाउन खोजेकी थिइन्। तर लुक्न सकेन।
स्वास्थ्य चौकीमा उनले आफूलाई १५ वर्ष भएको बताउने गरेकी छन्। तर, उनकी आमा राममायाले गंगाको जन्म ०६३ सालमा भएको बताइन्।
१२ वर्षकी बालिका गर्भवती भएको आफूले पहिलो पटक देखेको सरिखेत स्वास्थ्य चौकीकी अनमी सन्तोषी अधिकारीले बताइन्।